Niroso tamin'ny fitetezana an'i Afrika atsimo ny Papa Francis
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Niroso tamin'ny fitetezana an'i Afrika atsimo ny Papa Francis
Papa Francis any Mozambika
Miaraka amin'ny fientanam-po, Katolika ana hetsiny sy kristiana hafa any Mozambika sy ireo fanjakana mifanakaiky aminy ao atsimon'i Afrika no nandray izany Papa François ny Mozambika izay nahatongavany tamin'ny Alarobia, tamin'ny diany nitsangatsangana voalohany tany Afrika.
Ny Papa izao dia mitsidika an'i Mozambika, Madagascar ary Maorisy hatramin'ny talata amin'ny herinandro ho avy izao, rehefa hamarana ny fitsidihana any atsimon'i Afrika, ny fitsidihana fahefatra any amin'ny kaontinanta afrikanina hatramin'ny nahalany ny filoha katolika.
Ny tatitra dia nilaza fa ny Ray Masina dia nanao vavaka tany Mozambika taloha kelin'ny niaingany ho any Madagascar, firenena nosy iray izay misy ny Ranomasimbe Indianina eo amin'ny 250 kilaometatra miala ny morontsirak'i Afrika.
Antenaina ny hanohizan'ny Papa ny fitsidihany firenena telo any Afrika atsimo hiresaka amin'ny fahantrana lalina sy ny fomba tsara kokoa hampiasan'ireo fanjakana afrikanina loharanon-karena ireo mba hitondra fampandrosoana ny olony.
Nilaza i Vatican fa ny fitsidihan'ny pontiff any Afrika dia “Fivahinianana fanantenana, fandriampahalemana ary fampihavanana”.
An'hetsiny maro manerana an'i Afrika atsimo no manaraka ny fitsidihan'ny pontiff tany Mozambika tamin'ny alàlan'ny fantsom-pahitalavitra teo an-toerana sy iraisam-pirenena, ny gazety ary ny haino aman-jery hafa, fa ny sasany kosa nandeha avy tany amin'ny firenena mifanila aminy mba hanatrika ny lamesa masina any Maputo.
Tao Tanzania, vahoaka marobe, anisan'izany ny tanora, vehivavy sy lehilahy no nivory tamin'ny faritra maro, anisan'izany ny efitrano fialamboly, hijerena ny fitsidihan'ny Papa any Mozambika ihany koa.
Fitsidihana faharoa nataon'ny Papa Ray Masina tany Afrika, atsimon'i Sahara io taorian'ny fitsidihana toy izany tany Kenya, Oganda ary Repoblikan'i Afrika Afovoany efa-taona lasa izay.
Ny fiangonana katolika no andrim-panjakana lehibe manome serivisy fanabeazana sy fahasalamana ho an'ny olona avy any Tanzania ka hatrany amin'ny fanjakana hafa any atsimon'i Afrika.
Mekanika amerikanina amerikana, Abdul-Majeed Marouf Ahmed Alani, manota amin'ny fiaramanidina miaraka amina olona 150 ao anatiny
IATA: fanombohana malefaka amin'ny fe-potoana fitsangantsanganana an-tampony